Ingabe kujwayelekile ukuthi isibani somsebenzi wokukhanya esinamandla sishise ngenkathi sisetshenziswa?
Kunezimo eziningi ezingadala ukuthi ibhethri lishise Izimbangela zokushisa okubangelwa yibhethri ye-lithium: 1. Lapho i-voltage yebhethri ingu-0, ukumelana kwangaphakathi kwebhethri kuzoba kukhulu kakhulu, kuzodla okuningi njengamanje lapho ishaja, ngisho nejaha lamanje lakho ...
Ungayikhetha Kanjani Futhi Uyifake Amalambu Wokuqhuma?
Ungayikhetha Kanjani Futhi Uyifake Amalambu aqinisekisa ukuqhuma? Amalambu okuqhuma ukuqhuma abhekisa ezindaweni eziyingozi njengezindawo ezivuthayo ezivuthayo nezothuli. Kungavimbela amanye amagesi avuthayo nothuli olubangelwa ama-arcs, izinhlansi namazinga okushisa aphezulu angenzeka ngaphakathi kwesibani, ukuze ahlangabezane nezimfuneko o ...
Uyawazi amazinga amane amakhulu wezobuchwepheshe bamalambu we-LED aqhuma ukuqhuma?
Uyawazi amazinga amane amakhulu wezobuchwepheshe bamalambu we-LED aqhuma ukuqhuma? Isibani se-LED sokuqinisekisa ukuqhuma singesinye sezibani eziqinisekisa ukuqhuma. Isimiso sayo siyefana naleso sesibani esiqinisekisa ukuqhuma. Umehluko ukuthi umthombo wokukhanya osetshenzisiwe ungumthombo wokukhanya we-LED, obhekisa ku-lam ...
Indlela Elungile Yokufakwa Kwamalambu Aphuthumayo
Indlela Elungile Yokufakwa Kwamalambu Ezimo Eziphuthumayo Ukuqapha ukufakwa kwamalambu aphuthumayo 1. Okokuqala thola indawo yebhokisi lamandla namalambu, bese uwafaka ngendlela efanele, bese ulungisa izintambo eziyizisekelo ezintathu nezingama-core amahlanu ubude obuhambisanayo. 2 ...
Izinyathelo zokuqapha ukufakwa kwamalambu ezimo eziphuthumayo 1. Okokuqala, thola ukuthi ibhokisi lamandla lamalambu likuphi, bese uwafaka ngendlela eyiyo, bese ulungisa izintambo eziyizisekelo ezintathu nezinhlanu ezinengqikithi yobude obuhambisanayo. 2.Sebenzisa isikrufu esinamacala ayisithupha ukuvula ikhava yebhokisi lamandla e-ca ...
Izibani zezikhukhula eziholele ekuqhumeni, amalambu asezindlini, izinto zokukhanyisa ngaphandle nazo zinomsebenzi wokuhlobisa imvelo nokuhlobisa ubuhle bendawo. Izibani zezikhukhula eziholele ekuqhumeni zikhishwe ngaphandle komongo. Izibani zezikhukhula eziholelwe ekuqhumeni ziwuhlobo lwezinto zokukhanyisa zangaphandle ezisetshenziswe ...
Yini Ethinta Isikhathi Sokuphila seLL Lights-proof Lights?
Isibani se-LED sokuqhuma ukuqhuma luhlobo lwesibani sokuqhuma. Umgomo wayo uyefana nowesibani sokuqhuma, ngaphandle kokuthi umthombo wokukhanya ungumthombo wokukhanya we-LED, obhekisa kusibani esinezinyathelo ezahlukahlukene ezithathiwe ukuvikela imvelo yothuli negesi ...
Ungazikhetha kanjani kahle izibani eziqinisekisa ukuqhuma, amaphuzu alandelayo abaluleke kakhulu!
Ngaphambi kokuvela kwamalambu okuqinisekisa ukuqhuma, izinkampani eziningi zafaka amalambu ajwayelekile. Ngenxa yokuthi izibani ezijwayelekile bezingenazo izakhiwo ezinhle zokuqhuma, kudale ukuthi ezinye izingozi zasefektri zenzeke kaningi futhi zabangela ukulahleka okukhulu ebhizinisini. Imboni iyathandeka ...
Ngikholwa ukuthi lapho umthengisi exhumana namakhasimende asembonini ekwazi ukuqhuma uzohlala ehlangabezana neminye imibuzo enjengokuthi "Yini ukukhanya okukhombisa ukuqhuma? Yini ukukhanya okukhombisa ukuqhuma kwe-LED? Noma Uyini umehluko phakathi kokukhanya okuqhuma ukuqhuma nokujwayelekile L ...